Ny fampielezana ny voa | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Ny fampielezana ny voa
Fanorenana ny trano fonenan'ny firenena amin'ny tanany
Ny tompon'ny trano iray na tompon-tany iray na iray taorian'izay dia mitaky fahamatorana bebe kokoa, ny safidy tsara indrindra dia ny fandosirana. Ny mponin'ny lohataona sasany dia mihevitra fa sarobidy loatra ny lanjany ary tsy ampy fotsiny raha tsy misy azy ireo, fa amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny olona dia mahatakatra fa mila fandatsaham-bato, na dia ampiasain'ny dacha ho an'ny fialam-boly fotsiny aza.
Fomba fambolena karazam-boankazo: fitsipika momba ny fambolena sy fiahiana
Selerina dia sakafo manan-danja izay ahitana zavatra tena ilaina. Izany koa dia fanafody. Ny zavamaniry dia mihamitombo ny fahanterana, mandroso ny rafi-pitabatabana, manampy ny digestion miasa tsara ary miasa tsara amin'ny rafi-kadiny. Fantatrao ve? Seleri no vokatra tsara indrindra ho an'ny fahavoan'ny fahavoazana.
Fennel: fambolena sy fiahiana amin'ny trano fatoriany
Fennel, na dill pharmacie, ny endriny dia mitovy amin'ny dill tsotra, na dia manana tsirony tanteraka. Eo amin'ny zaridaina, ity zavamaniry ity dia tsy mahazatra loatra, satria ny fizotry ny fitomboany dia tena mandany fotoana. Saingy eo anelanelan'ny zaridaina dia misy ireo izay liana amin'ny fomba famolavolana sy fananganana fenitra ao amin'ny firenena.
Ny teknolojia ara-pambolena amin'ny fambolena arugula eny an-kalamanjana
Ny Supermarkets dia manolotra antsika karazana herbye sy zava-manitra samihafa, fa ny ankamaroan'ny mpikarakara tokantrano dia maniry ny hampitombo azy ireo. Raha manana tetika ianao, maninona raha manandrana? Amin'ny fandaniam-bola fotsiny, dia tsy ny fijinjana voalavo maitso ihany no ho azonao, fa koa fahafinaretana lehibe, mikarakara ny orinasa mitombo ary miandry ny vokatra.
Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny fambolena orkide
Fiompiana avy any Siberia
Ny tena manan-danja momba ny loharano azo avy amin'ny carotene - carotine Carotel
Fampiharana, fananana ara-pahasalamana, ary koa ny tombontsoa sy ny fahasimbana amin'ny tsaramaso mena
Fantatsika raha azo atao ny mitazona akoho sy boby
Mila rojom-boina ve ny rojo?
Fitsipika momba ny famokarana basilina ho an'ny ririnina
Ny momba ny akoho rhodonite
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ny fampielezana ny voa